Coronavirus uye Wiricheya Musika yakawedzera Face Masks inoda  | Karman® Mawiricheya
Posted on October 24, 2020 November 20, 2020 by csr 1688
hwiricheya Market Overview
Market Kutsvaga Ramangwana (MRFR) inofungidzira kuti iyo wiricheya musika saizi inogona kuita budiriro yakatsiga pachiyero che2.80% pakati pa2019 na2024 (nguva yekuongorora). Iyo newiricheya nhamba dzemusika dzinoratidza kuti kukosha na2024 kunogona kuve USD 9,554.07 Million, zvichiratidza tarisiro yakanaka yekukura. Tichadaro zvinopa COVID-19 kukanganisa kuongorora pamwe neshumo, pamwe neakadzama ongororo kutumira iyo coronavirus chirwere kubuda.
Iyo inoputika geriatric populace uye nezviitiko zvinowedzera zvezvinetso izvo zvinoda wiricheya tsigiro ine kusundwa kukura kwemusika kwe mavhiripu. Izvo zvinogara zvichiitika muhutano hwehutano uye huwandu huri kukura hwe vakaremara varwere vanobatsirawo iyo wiricheya indasitiri. Sangano repasi rose rehutano / WHO rinoti vangangoita gumi muzana muzana yevagari vepasi rose vanotambura neimwe nzira ye kuremara. Kuremara kunowanzoitika pakati pevanhu vakura uye vanhu vanotambura nezvirwere zvisingaperi, izvo zvakakonzera kukura kukuru kwe wiricheya musika.
Kumbira Yemahara Semuenzaniso Kopi yemushumo "hwiricheya Musika Wekutsvaga Musika - Global Forecast kusvika 2024 ”pa: https://www.marketresearchfuture.
hwiricheya Musika Wedunhu Maonero
The wiricheya musika yakave yakarongedzwa mudunhu seEuropean, America, MEA / Middle East ne Africa neAPAC / Asia Pacific. Ne shanduko mumusika uye seyechina yechina yechirwere chiri kuenda, zvinoita sekunge maitiro eCOVID 4 acharamba achiwedzera. Pane mukana wepamusoro wekuti pachave nekuwedzera kutumira kana masks havasi kushungurudzwa.
Wiricheya musika uye Hondo muCovid
Face Masks - FM-179 Kirasi 1 Isiri-Yekurapa Kumeso Masiki: Yedu 3 Rukoko Inodzivirira Masiki Inokodzera Kune Hutano Uye Kurapa Hofisi Kushandisa. Inoratidzira inogadziriswa mhete uye nemhino waya iyo inovimbisa yakachengeteka kukwana kune ese kumeso saizi uye maumbirwo. Iyo 3 dura dhizaini inosefa inosvika 95% yezvimedu, inokodzera mushandisi kupfeka maawa kumagumo, uye maficha lightweight, zvinhu zvinofema. Iyo FM-179 kumeso masiki akapetwa anogadziriswa uye anowedzera kufukidzwa kuzere kubva kumusoro kwemhino kusvika pasi pechirebvu. Izvi zvinonyanya kushandiswa sekuenda kumeso zuva nezuva masiki uye zvinonyanya kugadzikana.
Face Masks - FM-N95-F Iyo FM-N95-F yekupeta maitiro ndeye N95 5-ply foldable mask iyo inokodzera kushandiswa kwemazuva ese mukati kudzivirira kurwisana nehutachiona uye hutachiona. Ichisanganisira mhete dzemhete kuti dzijairane neyakaenzana, 5 jira rinofema, uye iri nyore kusvina simbi yemhino kuti ichengetedze mask kumeso. Aya mamasiki eN95 anogamuchirwa neNIOSH uye ane 95% yehunyanzvi hwekuita sefa, uye anoshanda pakurwisa maelerosol asina mafuta (nguva dzekushandisa dzinogona kushanda).
Face Masks - FM-N95-C Iyo FM-N95-C Mukombe dhizaini inoteedzera yekufema masiki ndeye NIOSH Certified inoraswa N95 maski iyo inopa ingangoita 95% kusefa kwekuchenesa. Inoshanda mukudzivirira kubva kune mamwe maeerosols asina mafuta. Chinofema face mask Filter zvinhu inopa zvakanyanya mweya wekufema wakadzivirirwa uye chengetedzo izere kune iye anoibata kwemaawa masere. Iyo inogadziriswa mhuno yemhuno iri akaita yeakasimba aruminiyamu uye inogona kuumbwa zviri nyore padivi pemhino yako bhiriji ku kudzivirira leakage uye eyewear fogging. Iyo yakasununguka nzeve nzeve inovimbisa chisimbiso chakasimba uye chakachengeteka, uye yakapfava yemukati urethane furo inopa nyaradzo huru kune avo vanoipfeka zuva rese.
Kubva 2018, mubatsiri mukurusa pasirese wiricheya musika anga ari maAmerican, uye anogona kuwana kukura kwe2.24% panguva yekuongorora. Kukura kusingaenzanisike kwemusika wedunhu kunogona kupihwa mbiri kuvapo kwakasimba kwevatengesi vane mukurumbira uye zviitiko zvinowedzera zvezvirwere zvisingaperi. Idziva rinokura revanhu vakura kuyambuka US neCanada uye kukwira kwakakwira kwepamberi mawiricheya pakati yakakura remara ruzhinji zvakare zvinobatsira musika weAmerica. Irobhoti mavhiripu musika wave uchiita zvakanyanya mudunhu mumakore achangopfuura, nekuda kwespike inopinza muhuwandu hwevanhu vakafutisa vasingakwanise kuita zviitiko zvinoda kukurumidza kufamba.
George Floyd Riots uye Mukadzi mune Scooter